Horyaalki 31-aad ee Ciyaaraha Fudud oo Muqdisho ka furmay
Waxaa ugu horreyn xaflada ka hadlay Xoghayaha Xiriirka cayaraha fudud Maxamed Cabdullahi Dhaaleey, waxuuna sheegay in horyaalka ay ka qeyb galayaan 8 koox oo isugu jira Wiilal iyo Gabdho ayna ku tartami doonaan qaybaha uu orodka ka kooban yahay, tartankana a u socon doono muddo 4 maalin ah.
Xogahayaha ayaa intaa kudaray in horyaalkan uu sanadkan ka xamaasad badan yahay horyaaladii lasoo dhaafay waxuuna tilmaamay in horumarki Ciyaartoyda Xulka qaranka ciyaaraha fudud ay kasoo sameeyeen ciyaarihii All african games ee dalka Congo ka dhacay ay keentay in ciyaartoy kasta uu dadaal u galo sidii uu u hiigsan lahaa kaalmaha lagu xulan karo taasna ay tahay horumarka uu xiriirka Soomaaliyeed ciyaaraha Fudud.
Kusimaha Guddoomiyaha Xiriirka Cayaaraha Fudud Marwo Khadiijo Aadan Daahir oo xafalada ka hadashay ayaa ugu horreyn u mahad celisay sida ay kooxaha iyo ciyaartoydooda ugu soo diyaar garoobeen horyaalkan , waxayna tilmaamtay in xiriirkuna uu ka rajeynayo diyaargarowgi ay bilihii lasoo dhaafay kooxaha ku jireen laga helo ciyaartooy tayo leh oo difaacda sumcadda ciyaraha Fudud.
Madaxa Xiriirada Gos , Xaaji Maxamed Axmed Colow oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in Gos ay soo dhaweynayso dadaalka XSCF iyo horumarka uu ku tallaabsanayo , Gos ay taageero la garabtaagan tahay mar kasta, waxuunan kooxaha u rajeeyay in tartan wacan soo bandhigaan.
Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay oo tartanka furay Agaasiamaha waaxda isboortiga Cabdulaahi Aabow Xuseen , waxuuna sheegay in ciyaaraha Fudud ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee guulo laga keeni karo ciyaaraha heerka caalami , wasaaradduna ay xoogga saari doonto sidii ay kaalin uga gaysan lahyd horumarka isboortiga dalka gaar ahaan ciyaaraha Fudud.
Kulamadi furitaanka horyaalka waxaa la orday orodka 200 iyo 400 ee isreebreebka ah iyo orodka 800m iyo 5,000m
Ciyaartoyda ka qayb galasya tartanak ayaa dityaar gariow kujiray tan iyo bilowgi sandkan waxaana lagu rajo weyn yahay in uu horyaalkan kasoo baxaan ciyaartoy.